Madaxweyne Xasan Sheekh oo Dhaliil u jeediyay Ciidamada Kenya ee Kismaayo ku sugan – SBC
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Dhaliil u jeediyay Ciidamada Kenya ee Kismaayo ku sugan
Posted by Webmaster on May 27, 2013 Comments
Madaxweynaha Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa dhaliil u jeediyay ciidamada Dowlada Kenya ee ku sugan magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose .
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Ciidamada Midowga africa kula jira howlgalka Amisom ee Kenya ay ku dhaqaaqeen talaabo uu ka xumaaday taas oo ah in ay sugi waayeen amaanka wafdi wasiiro ah oo Kismaayo u tagay howl dowladu u dirtay waasida uu hadalka u dihgaye.
Waxa kale oo uu taabtay Xasan Sheekh xili uu jeediyay Qudbad in arintaasi ay ku kalilftay dowlada in ay kala xaajoodaan midowga africa maadaama ay ciidamqadaasi ka leexdeen heshiiskii ciidamada Amisom iyo dowlada ka dhexeeyay.
“waxaan ogsoonnahay in dowladu ay dagaal kula jirto xarakada alshabab ayna dooneyso in ay sii horumariso dagaaladii ay kagala wareegi laheyd gobolada iminka ay gacanta ku hayaan, balse talabada ciidamada Kenya ee ku sugan kismayo ay qaadeen waxa ay nagu dhalin kartaa kalsooni daro,” sidaasi waxa yiri Madaxweyne Xasan.
Hadalka Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu imanayaa xili ciidamada Kenya ee Amisom ay Garoonka kismaayo ku xanibeen mudo 24saac ah wafdi wasiiro ka kooban oo dowlada federalka ka tirsan iyagoo fulinaya Amarka maamulka KMG ah ee ka jira Kismaayo.